Itoobiya iyo Djibouti oo furay tareen isku xiraya labada waddan - BBC News Somali
Image caption Madaxda Itoobiya, Djibouti iyo Shiinaha ayaa ka qayb galay xafladii lagu furayay jidka tareenka
Taareenkii ugu horreeyay ee koronto ku shaqeynaya ee qaaradda Afrika ayaa waxaa uu ku ordi doonaa xawaare gaaraya 120 KM saacaddii, isagoo waqtigii safarka ee labada caasimadood dhexdooda ka dhigaya wax ka yar maalin nuskeed.
Waxay markii hore alaabooyinka ku qaadan jirtay muddo saddex maalmood ah waddada baabuurta dhulka u dhexeeya dekedda Djibouti ilaa caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa.
Maalgalinta mashruucani waxay inta badan ka timid Bangiga wax Dhoofinta iyo soo Dejinta ee waddanka Shiinaha, oo isagu sidoo kale aad ugu lug leh mashaariic kale ee kaabayaasha dhaqaalaha dalka Itoobiya.
Iyagoo ka hadlayay munaasabadda furitaanka, hoggaamiyeyaal ka kala socda labada dal ee Itoobiya iyo Djibouti waxay sheegeen in jidka cusub ee tareenku uu sii xoojin doono xiriirka ganacsiga ee ka dhaxeeya.
Itoobiya waxay haatan wax kala soo degtaa kana dhoofsataa ku dhowaad 90% alaabooyinkeeda dekedda dalka Djibouti.
Image caption Tareenka ayaa dhimi doona waqtiga la isaga socdo labada waddan